Sosialy - Napetraka ny paikady ho fanatsarana ny toeram-ponenana tsizarizary an-tanan-dehibe
Anisan’ny firenena marefo amin’ny fiovan’ny toetrandro i Madagasikara. Miakatra ny maripana, mikorontana ny toetrandro, mihamafy ny fiantraikan’ireo loza voajanahary. Ho fiatrehana izany, misy ny atrikasa entina handravonana sy hankatoavana ireo paikady entina hanatsarana ny toeram-ponenana tsizarizary, izay notontosaina ny 20 aprily 2022 lasa teo.
Nametraka ny paikady ho fanatsarana ny toeram-ponenana tsizarizary
Anisan’ny fanamby goavana ho an’ny firenena ankehitriny ny fijerena ny fomba entina manampy ireo mponina mipetraka an-tanàn-dehibe manoloana ny fiovan’ny toetrandro indrindra fa ireo mipetraka any amin’ny toeram-ponenana tsizarizary. Tontosa ny Alarobia 20 aprily 2022 teo ny atrikasa izay entina handravonana sy hankatoavana ireo tahirin-kevitra rehetra hametrahana ny paikady ho fanatsarana ny toeram-ponenana tsizarizary manoloana ny fiatrehana ny fiovan’ny toetrandro sy hamaritana ireo laharam-pahamehana amin’ny fampiharana azy. Marihina mantsy fa manodidina ny 77% ny mponina eto Madagasikara no monina any amin’ireny toeram-ponenana tsizarizary ireny.
Ny Programan’asa Ifarimbonana hanatsarana ny toeram-ponenana tsizarizary (PIATT) dia miroso indrindra amin’ny fijerena ireo lafiny ara-tontolo iainana sy ny fiatrehana ny fiovan’ny toetrandro entina hitsinjovana ireo mponina eny ifotony indrindra ireo izay any amin’ny toerana sy tanàna marefo.
Ny Sekreteram-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana (SENVH), amin’ny alalan’ny famatsian’ny ONU Habitat dia namolavola paikady ho fisorohana sy fanatsarana ny toeram-ponenana tsizarizary mijery ny lafiny fiovan’ny toetrandro sy ny fanamafisana ny fiatrehana an’ireo mponina an-tanàn-dehibe izany. Efa nisy ny dinika sy fakan-kevitra izay natao tany any amin’ireo tanàn-dehibe telo iasan’ny PIATT dia Manakara sy Moramanga ary Antananarivo. Nivoitra tamin’izany ireo fomba fiasa ary teboka ilaina fanatsarana tokony hampidirina anatin’ny paikady.
Nivoaka nandritra ny atrikasa notanterahina ny 20 Aprily 2022 teo ny torolalana mifandraika amin’ny fisorohana ny fisian’ny trano tomboka sy ny fanatsarana ny toeram-ponenana tsizarizary.
Mifandraika amin’ireo fenitra sy politika ary paikady momba ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe sy ny fonenana (LUH, PNDU, PNL) ary ihany koa mijery akaiky ireo lafiny momba ny fiovan’ny toetrandro ihany koa araka ireo fifanarahana sy fenitra iraisam-pirenena ihany koa ity paikady ity.
Tafiditra ao anatin’ny dingana fahatelo amin’ny PIATT izay mitanjona ny hametraka fiaraha-miasa maharitra sy hanetsika ireo mpisehatra isan-tsokajiny eny ifotony sy nasionaly mba hanovana sy hanatsarana ireo toeram-ponenana tsizarizary ity asa ity.
Miisa dimy ireo foto-kevitra iasan’ny fandaharan’asa
Fotokevitra lehibe dimy (5) no iasan’ity programan’asa ity dia ny fisorohana ny fihitaran’ireo toeram-ponenana tsizarizary ; ny fanatsarana ny fisitrahana ireo antokon-draharaha fototra sy fanatsarana ny fiainan’ny mponina marefo ; fanampiana hery ireo toeram-ponenana tsizarizary amin’ny fiatrehana ny fiovan’ny toetrandro; fanamafisana orina ny ady atao amin’ny fiovan’ny toetrandro amin’ny alalan’ny fampihenana ny tahan’ny famokarana ny entona mangeja hafanana (GES); fampandraisana andraikitra ireo mpisehatra isan-tsokajiny anatin’ny fiatrehana ny fiovan’ny toetrandro.
Isan’ny mandray anjara tamin’izany ireo solontena avy amin’ny departemantan’ny minisitera isan-tsokajiny (SENVH, MASTF, MEDD, MID, MPPSPF, MEAH, MEF, MPEB), ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ireo avy amin’ny Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny ONU Habitat, ny ekipa mpandrindra ny PPAB ary ireo mpisehatra miasa manodidina ny fisorohana sy fanatsarana ny toeram-ponenana tsizarizary.